MYU SHADAN: USB Flash Drive ရဲ့ Write Protect ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း
USB Flash Drive ရဲ့ Write Protect ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း
USB Flash Drive ရဲ့ Write Protect ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၂)ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်.. ဒီနည်းက လူတိုင်းအဆင်ပြေ/ မပြေတော့မသိပါဘူး. လုပ်ကြည့်မိသလောက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်..
1.ကွန်ပျူတာကို Shutdown ချလိုက်ပြီး USB Memory Stick ကို ကွန်ပျူတာမှ တပ်လိုက်ပါ
2.ကွန်ပျူတာကို power on ပြီးရင် F8 ကီးကိုဖိထားပါ.. Advanced Boot Options screen တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. Safe Mode with Command Prompt ကိုရွေးလိုက်ပါ..
ခဏနေရင်တော့ Safe Mode with Command Prompt နဲ့ တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့ USB Stick က Drive ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိဖို့တော့လိုတာပေါ့..
ဥပမာအားဖြင့် သင့်ရဲ့ USB Stick က Drive E ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီလိုရိုက်လိုက်ပါ
3. C:\_windows\_system32>E: လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ
4. E:\_>format E: လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ
ဒါဆိုရင် format လုပ်တာကို Confirm တောင်းတဲ့ ဘောက်ကလေး (Y/N) ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. Y လိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ USB Flash Drive ကို Format ချနေပါပြီ.. ပြီးရင်တော့ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို ပုံမှန်ပြန်တက်နိုင်ပါပြီ .. အထက်မှာ ကျွန်တော် ပြခဲ့တဲ့ Drive E အစား မိမိ USB Drive ရဲ့ Drive Letter ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီနည်းလမ်းကတော့ Registry Editor မှာ သွားပြင်ရမှာပါ..
1.Start>Run (သို့မဟုတ်) ၀င်းဒိုး7မှာ Start ထဲမှာ regedit လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ..
2.Registry Editor ဘောက်ကျလာတဲ့အခါ
3. ညာဘက်က Write Protect ကို Double Click ခေါက်ပြီး Hexadecimal Value ကို0ပြောင်းပေးလိုက်ပါ...
စက်ကို Restart ချပြီးရင် Write Protect မဖြစ်တော့ပါဘူး.. ဒါ စက်မှာ ပြင်တဲ့နည်းလမ်းပေါ့ခင်ဗျာ...
တကယ်လို့များ...HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Control\_StorageDevicePolicies ကို မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီမှာDownload here ဒီfile လေးကို ဒေါင်းပြီး Double Click ခေါက်ပေးလိုက်ပါ..HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Control\_StorageDevicePolicies ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်...
အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကို နှစ်ခုစလုံး လုပ်ပြီးရင် အောက်က အဆင့်လေးကို လုပ်ပေးလိုက်ပါအုံး..
1.Start>Run ထဲမှာ CHKDSK E: /F လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ.. E ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိ Drive ရဲ့ Drive Latter မှန်ပါစေနှော်.. သတိထားပေါ့..
ခြုံပြီးပြောရရင် ပထမနည်းလမ်းက Pen Drive ကို Safe Mode မှာ Command Prompt နဲ့ Format ချတာပါ.. ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ မိမိစက်မှာ Write Protect ကို ဖြုတ်ပစ်တာပါ.. တတိယ ပြောတာကတော့ Pen Drive ကို ပြန်လည် ပြုပြင်လိုက်တာပါ.. ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ပါပြီ...
မပြေခဲ့ရင် မောင်ပေါက်ရဲ့ လေ့လာမှုအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်..
မပြေရင် မပြေကြောင်း၊ ပြေရင်ပြေကြောင်းတော့ သိချင်ပါသေးတယ်..
Posted by myu shadan at 1:48 PM